Torimaso tsotra sy torimasom-panahy – filazantsaramada
Torimaso tsotra sy torimasom-panahy
Publié parfilazantsaramada	 mars 13, 2012 mars 14, 2012 Laisser un commentaire sur Torimaso tsotra sy torimasom-panahy
K A R E M Y 3
Misy tena sarotra amintsika olombelona ny manatanteraka zavatra sasany eo amin’ny fiainantsika, isan’izany ny fananana fahononam-po (ny mifehy ny nofontsika sy ny filàna aterak’izany nofo izany).
Ho an’ny Kristiana dia voalaza ao amin’ny Galatiana 5: 23 fa ‘vokatry ny Fanahy Masina’ ny fahalemem-panahy sy ny ‘fahononam-po’ (‘maitrise de soi’ amin’ny dikan-teny Frantsay). Eo amin’ny fiainana andavan’andro dia misy miresaka ny amin’ny fahaizana mifehy ny vata-tena sy ny eritreritra, ary azo singanina amin’izany ohatra izay lazain’ireo mpanao yoga … Mety ho vitan’izy ireo amin’ny ampahany ihany anefa izany fifehezana izany, fa izay akony amin’ny fanahiny avy eo dia sarotra ny hamisavisa azy; maro no efa nandalo tamin’izany lalana izany ary mijoro vavolombelona ny amin’ny faharatsian’ny yoga.
Ny tena azo antoka, dia izay atoron’i Jesosy antsika, ary azo raisina amin’izany izay nambarany ao amin’ny Matio 26:41 : « Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin’ny fakampanahy; mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. »
Jesosy, ilay Zanak’Andriamanitra aza niteny an’io.
Izy dia tena nivavaka, na dia Zanak’Andriamanitra aza.
Tena nofo tokoa mantsy Izy, na dia Andriamanitra Fanahy aza.
Ary izay naha-nofo Azy izay indrindra no nahatonga Azy hiharan’ny fanaintainana, ny hanoanana, ny heteheta, sns. Fa rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy.
Hoy i Jesosy amintsika : miareta tory sy mivavaha. Karazana didy mihitsy eto izao teny izao. Efa rentsika ny nanjo Azy rehefa nentin’ny Fanahy tany an-efitra Izy : nanaikitra Azy tokoa ny nofony, tao ny hanoanana, tao ny tsy fahatoriana satria tany an-efitra. Na dia teo aza ny antson’ny nofo, dia nifikitra tamin’ny firaisana tamin’Andriamanitra Rainy Izy tamin’ny alalan’ny Teniny, ary tena azo antoka fa tsy tapaka niresaka tamin’ Andriamanitra Izy. Nivoaka ho mpandresy Jesosy rehefa afa-nenina tamin ‘ny fakana fanahy Azy Satana. Voalaza fa nandao Azy Satana aloha.
Ny mpianatra dia tena nofo tokoa, ary mora azon’ny fakam-panahy. Izany indrindra no nanoroan’ny Tompo azy eto ny hiaritory sy hivavaka, fa mafy ny fakam-panahy ateraky ny nofo. Raha ny mahazatra, ny alina dia natao atoriana, ary ny zaza mitombo aza dia tokony ho adin’ny sivy no fotoana kely indrindra tokony hatoriany. Raha ny ara-pahasalamana, ny torimaso dia mitondra fanalana havizanana.
Jesosy nefa eto dia miteny hoe miareta tory sy mivavaha.
Niatrika zava-tsarotra sy ady mafy mandrakariva Jesosy, ary nitaky hery sy finoana taminy mandrakariva ny zavatra natrehiny.
Izy anefa dia azo atao hoe olom-bavaka.
Raha ny Tompo aza, niaritory sy nivavaka, hatraiza no tokony hiaretantsika tory sy hivavahantsika! Isika izay mpanota, tsy tanteraka. Ny Tompo dia voalaza fa natao tanteraka. Izy izay Andriamanitra dia natao tanteraka, ary isika olombelona dia tsy mety tanteraka amin’ny herin’ny tenantsika, fa tsy maintsy ny Tompo no miasa, miaro antsika, mamela heloka antsika.
Ny firaisantsika Aminy anefa no nolazainy fa fomba hahazoany mampahefa amintsika ny tiany ho antsika. Ny sampana tsy mahay mamoa ho azy, fa tsy maintsy miray amin’ny foto-boaloboka izy vao mamoa, fa lasa maina, ary arehitra sisa no azo atao aminy. (vakio Jao. 15:1-5)
In-telo Jesosy no nijery ny mpianany, na naharitra nivavaka izy ireo na tsia.
Mampiseho izany fa tena zava-dehibe ny faharetana amin’ny vavaka. Ary tena tian’i Jesosy ireto mpianatra ireto ka narahiny maso fatratra ny fomba fanatanterahany ny baiko mba hivavaka.
« Hay! Tsy mahazaka ny miara-miari-tory na dia ora iray ihany aza hianareo! » (Mat. 26:40). Tratran’ny Tompo natory hatrany ireo mpianatra. Hoy ny Tompo aminao ankehitriny : Miareta tory sy mivavaha mba tsy hidiranao amin’ny fakam-panahy.
Hiatrika ny Paska isika raha afaka herinandro vitsivitsy. Mba ho Paska hitondra fanafahana ho anao tokoa io Paska avy io.
Andramo , Andramo, Andramo …
Mahareta, mahareta, mahareta amin’ny vavaka.
Mety ho sarotra amin’ny voalohany, fa ho hitanao ny vokatra! Ho hitanao fa sampana miray amin’ny voaloboka tokoa hianao. Ny Tompo anie hampahery anao!
Publié parfilazantsaramada mars 13, 2012 mars 14, 2012 Publié dansUncategorized
Raha tsy hosasako …